Manohy ny sidina Armenia sy Azerbaijan i Russia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manohy ny sidina Armenia sy Azerbaijan i Russia
Ny zotram-piaramanidina roa tonta dia afaka manao sidina roa isan-kerinandro avy any Moskoa mankany Baku ary inefatra isan-kerinandro avy any Moskoa mankany Yerevan
Ny sidina avy any Moskoa mankany Yerevan dia miverina amin'ny 15 Febroary
Ny sidina avy any Moskoa mankany Baku dia manomboka amin'ny 17 febroary
Tamin'ny volana martsa 2020, nampiato ny sidina mpandeha ara-barotra rehetra any ivelany i Russia noho ny areti-mifindra coronavirus
Nanambara ny tompon'andraikitra misidina fiaramanidina sivily fa ny Federasiona Rosiana dia manohy ny sidina ara-barotra voalahatra miaraka amin'i Armenia sy Azerbaijan, naato noho ny areti-mifindra coronavirus, nanomboka androany.
Ny zotram-piaramanidina roa tonta dia afaka manatanteraka sidina roa isan-kerinandro avy any Moskoa mankany Baku ary inefatra isan-kerinandro avy any Moskoa mankany Yerevan. An'i Russia Aeroflot nanambara ny fikasan-dry zareo hanatanteraka sidina efatra isan-kerinandro mankany Yerevan manomboka ny 15 febroary, ary sidina roa isan-kerinandro mankany Baku, manomboka ny 17 febroary.
Avela hiditra any Armenia ny mpizahatany amin'izao fotoana izao, saingy mila adina PCR natao mihoatra ny 72 ora alohan'ny hahatongavany.
Ny fidirana ao Azerbaijan kosa dia mihidy ho an'ny mpizahatany amin'izao fotoana izao. Diplomaty, vahiny manana havana manana zom-pirenena azerbaijaney, vahiny manana fahazoan-dàlana na toeram-ponenana ary mpianatra no mahazo miditra, fa tsy maintsy manana fitsapana PCR natao mihoatra ny 48 ora alohan'ny fiaingana.
Tamin'ny volana martsa 2020, nampiato ny sidina mpandeha ara-barotra rehetra any ivelany i Russia noho ny areti-mifindra coronavirus. Tamin'ny volana septambra dia nijanona tsy nitondra ny sidina nampodiana anay i Russia. Ankehitriny dia avela hanao sidina mpandeha sy mpandeha ny kaompaniam-pitaterana; na izany aza, ny lalàna miditra ho an'ny mpandeha dia tsy mitovy amin'ny firenena.
Ny World Trade Organisation dia mitonona ny vehivavy voalohany, Tale Jeneraly afrikanina